Tag: ping.fm | Martech Zone
10 Barnaamijyada Ganacsiga ee Ganacsiga ee loogu talagalay Shirkadda
Sunday, May 10, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
In yar oo qalab ah ayaa bilaabaya inay u muuqdaan shirkadaha si ay u maareeyaan isgaarsiinta iyaga oo adeegsanaya Twitter ama adeegsiga aaladaha yar yar ee internetka dhexdooda ah. Waxaan maarayn jiray riixista Martech Zone ku quudinta Twitter adoo adeegsanaya Twitterfeed. Markii aan ku soo galay waqtiyada qaar markii aan muujinayay Twitterfeed websaydhkii dhowaa, in kastoo, daawadayaasha qaar ay wadaageen inay jiraan qalabyo kale oo waaweyn oo halkaas yaal. Waxaan go'aansaday inaan fiiriyo! Qalabka Maareynta Twitter ee Shirkadaha ExactTarget SocialEngage